.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog က ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ရှေ့မှာ ပုံလေးတွေ ထည့်ချင်ရင်
Blog က ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ရှေ့မှာ ပုံလေးတွေ ထည့်ချင်ရင်
ခုလို Blog က ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ရှေ့မှာ ပုံလေးတွေ ထည့်ထားတာကို သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကြိုက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း အဆင့်ဆင့် သွားပြီး လုပ်လိုက်ပါ။
2 -> Layout
3 -> AddaGadget
ပြီးရင် ဒီအောက်က ကုတ်လေးကို ထည့်ပြီး Save လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ..
ပုံကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံလင့် ပြောင်းပြီးတော့ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအောက်က ပုံလေးတွေကို သဘောကျတယ်ဆိုရင်..
ပုံအပေါ်ကို Right Click >> Copy Image Location လုပ်ပြီး အနီရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့နေရာမှာ ပြောင်းထည့်လိုက်ပါ။
Blogger ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...။
ဒီပို့စ်လေးကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် Blog ကို Credit ပြန်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 05:31